Bayaanka Shirka Kismaanyo:- Nabar La Filayey Naxdin Maleh. | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
Bayaanka Shirka Kismaanyo:- Nabar La Filayey Naxdin Maleh.
Dhammaan waa qorshe Imaaraadku soo amaamuday, Axmed Madoobe ayaa Kooxdan la filayey in uu u caqli celinayo, isaguna wuxuu noqday kii ugu Khatarsanaa, waxaana la dareensanaa in uu noqon karo kan wax xakamayn-kara, hasa yeeshee sida bayaanka ka muuqda oo ay dawlada federaalka eedo ugu soo jeediyeen Waxaa uu Axmed Madoobe noqday mid ka dhaawac badan kuwii kali kaliya bayaanka u soo saarayey.
Bayaankan Axmed Madoobe badhtanka uga jiro waxay ku tusaysaa in uu ka daahisan-yahay”داهية” kuwa kale ee hore u soo saaray, bayaankani wuu kaga dhaawac xun yahay dawladda bayaanadii hore ay u soo saareen maamuladu.
Bayyaankan Waxaa lagu soo koobi karaa.
1. In maamul goboleedadii dawlada Federaalka baal maray ay halkoodii taagan yihiin.
2. In la qaatay fikirka odhanaya dawladu lama tashan maamul goboleedyada.
3. In qodobka 53 aad ay wali ku dhagan yihiin maamuladu ayna isla qaateen fikirka ah in dawladu qodobkaa ku xadgudubtay.
4. In dawladda dhexe mas’uul ka tahay waxa ay u arkaan dhaliilo jira.
5. In hadda wixii ka danbeeya waxaanay iyagu mindida daabkeeda hayn aanay waxba ka soconayn.
Waxan lagu sheego maamul goboleedada fedralka Somalia, xagay metelaan? Dhulalka ay sheegtaan, Alshabaab baa ka taliya 85% in ka badan. Waxay wada haystaan mandate laga siiyey Villa Somalia iyo UNIPOS, waa dulmi weyn, inay ku hadlaan afka Somalida.
Haddii aynu dib u milicsano taariikhdii koonfurta Somalia. Talyaanigii, wuxuu koonfur uga tegay 8 degmo, halka dhanka kalena Ingiriisku uga tegay 6 degmo iyo 22 degmo suge, oo ay u dhamays tiraayeen nidaam iyo maamul. Khiyaamadii ugu horeesay waxay sameeyeen koonfurtu. 8-doodii degmo waxay ka dhigteen 8 gobol, halka qaldaan wiifyadii 6-doodii degmo laga dhigay 2 gobol keliya, waliba ay ku faraxsanayeen, q/wiifyadu dhacaa iyo dulmigaa lagu hayey. Haddii koonfurtu, ay Somalia siyaasiyan u kufsadeen ilaa 60kii, wali ma kufsadkii siyaasadeed, bay sii wadi. ” Aleysa lakum rajulun, rashiidun”. Waar ummadda Somalia Alle dartii, waa in looga dhawrsadaa.
Dadkan ku nool koonfurtu, waxaad moodaa inay yihiin ama wada noqdeen ajinebi, aan aqoon wax Somalinimadu tahay iyo waxa ka dhaxayn jirey. Dhaqankii iyo wixii la wada lahaan jirey, maba oga; Somalia, reer koonfur, waxaad moodaa in loo soo diray oo la yidhi soo baabiya, waxay ku wadaan, yaraysi, iyo siyaasad xumo aanay u bislayn, shaqada ay mar walba damcayaan inay wax ka hogaamiyaan siyaasada dalka.
Waxa hor boodaya, Siyaasiyiinta koonfur, ina C/rashiid Cali Sharmaarke iyo kuwo kale, oo ay ka mid yihiin kuwii badda la iibsaday. Xalweyste waa qof aan garanayn meesha uu ku socdo iyo wuxuu doonayo toona. Haddii habari u timaado oo tidhaahdo ii keen calooshaada, iska hubsan maayo, wuxuu hore uga tegaya meesha ay tidhaahdo tag, isagoo u fududeenaya oo weydiinayaa calooshayda intee bay kugu qaadanaysaa sugideedu, maxaadse i siinaysaa.
Haddii aan u soo noqdo, kooxdan isugu tagtay Kismayo, macallinkoodu waa Xalweyste, gacan yarihiisuna waa sakiin, maxay soo saari karaan. ” Nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday”. WBT